Wasiir C/raxmaan Xoosh oo kullan la yeeshay ururada bulshada rayidka ee Jubbaland (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir C/raxmaan Xoosh oo kullan la yeeshay ururada bulshada rayidka ee Jubbaland (SAWIRO)
Wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa kullan wadatashi oo ku saabsanaa hannaanka dib u eegista dastuurka la yeeshay ururada bulshada rayidka ee maamulka Jubbaland.
Kullankaasi ayaa waxaa kasoo qeyb-galay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland Mudane Sheekh Cabdi Maxamed C/raxmaan, culumadda, haweenka, dhaqanka iyo dhalinyarada Jubbaland.
Wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil oo kullanka ka hadlay ayaa ku tilmaamay kullanka wadatashiga ee Kismaayo ka dhacay inuu ahaa tallaabo horey loogu qaaday xoojinta wada shaqeynta wasaaradda iyo maamulka Jubbaland.
“Runtii farxad weyn bay noo tahay in aan maanta kulan wadatashi ah ku qabano Kismaayo, waxa aan u nimid inaan ra’yigiina dhageeysano, waa tallaabo kale oo ay wasaardada horey u qaaday, si aan wadashaqeyn joogta ah ula yeelano maamul goboleedka Jubbaland” Sidaas waxaa yiri wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Sidoo kale, C/raxmaan Xoosh Jibriil oo ka hadlay geedi-socodka dib u eegista dastuurka ayaa yiri:-
“Macnaha dastuurka waa heshiis bulsho, sidaas awgeed waxa aan doonaynaa inaan bulshada rabitaankooda ku hoggaaminno geedi-socodka taariikhiga ah ee dib u eegista dastuurka ee sanadkan ka billaabmi doona dalka”.
Dhinaca kale, dadkii kasoo qeyb-galay kulanka ayaa goobtaasi ka jeediyay tallooyinkooda ku saabsanaa qorshaha guud ee hannaanka dib u eegista dastuuka dalka, waxayna sheegeen inay ka qeyb-qaadan doonaan hirgelinta arrintaas.
Ugu dambeyn, wasiir C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa ballanqaaday in kullamada wadatashiga ay gaarsiin doonaan dhammaan deegaanada ku yaalla maamul goboleedyadda dalka.